प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेपछि काम गर्नलाई वाधा, अदालतले छिटाे टुंगो लगाइदिए हुन्थ्यो : नगरप्रमुख सरावगी - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेपछि काम गर्नलाई वाधा, अदालतले छिटाे टुंगो लगाइदिए हुन्थ्यो : नगरप्रमुख सरावगी
छोटो समयको राजनीति प्रवेशबाट जनताको मन जित्न सफल नेता हुन् विजय कुमार सरावगी । पार्टी राजनीतिमा कम लगानी भएपनि उनी कुनै ख्यातिप्राप्त नेताभन्दा कम छैनन् । उनी वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पनि हुन् । सादा जीवन र उच्च विचार राख्ने सरावगी जनताको सेवाप्रति सधैं दत्तचित्त छन् । उनी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण जनताको समान रुपले सेवा गर्नुपर्ने ठान्दछन् । जनतामाथि हुने भेदभाव थिचोमिचो विरुद्ध सधैं आवाज बुलन्द गर्ने उनी सालिन नेता र स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छन् । यिनै समसामयिक विायमा केन्द्रित रहेर विजयकुमार सरावगीसँग अनलाइनपानाका लागि कालिका महतले गरेको कुराकानी:
हाम्रो काम दिनभरि योजना तर्जुमाहरुको अनुगममा विभिन्न वडामा जाने +त्यहाँ भएका विकास निर्माणका काम हेर्ने हुन्छ । अहिले हामीले जनताको पीरमर्का बुझ्नलाई घर–घरमै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण धेरै जसो जनताको काममै व्यस्त रहन्छौं ।
जनताको काम गर्न घर–घरमै जानुपर्ने भएकाले व्यस्त हुनुभएको हो ?
अरुका कुरा गर्न मिल्दैन । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरा आफ्नैखाले काम छन् । त्यो म भित्री मनदेखि दत्तचित्त भएर गरिरहेको हुन्छु ।
तपाईं त कोरोनो कहरमा पनि पर्नुभयो, त्यसबेला जता जोगाउन कत्तिको समस्या भयो ?
कोरोना कहर पार गर्न त्यति सजिलो काम थिएन । त्यो सबैलाई थाहै छ । नयाँ रोग जसको उपचार पनि थिएन । वीरगन्ज कोरोनाको पहिलो इपी सेन्टरै भएको तपाईलाई थाहै छ । मलगायत मेरा परिवार र वीरगन्ज महानगरपालिकाका कर्मचारीसमेत संक्रमित भए । धेरै ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्यो । त्यही पनि हामीले धैर्यतापूर्वक जनताको ज्यान जोगाउन क्वारेन्टाइन, आइसुलेसनलगायतको व्यवस्था मिलाइयो । क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई खाने व्यवस्थादेखि कोरोना अस्पतालसमेत सञ्चालन गरियो । त्यसमा आवश्यक चिकित्सक र कर्मचारीको व्यवस्था गरियो । यसरी आफैं संक्रमित हुँदाहुँदै पनि संयमित ढंगले काम गरेर कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न हामीहरु सफल भयौं ।
कोभिड–१९ को समस्याले वीरगन्जमा आतंकै थियो, आफैं संक्रमित हुँदा पनि नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न कसरी सफल हुनुभयो ?
सबैभन्दा पहिला त हामीले जनचेतना फैलाउने कामहरु गर्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले पनि राम्रै सपोर्ट गर्‍यो । त्यसपछि संक्रमित टोलहरुमा स्वास्थ्य क्याम्पको पनि व्यवस्था गरियो । त्यति हुँदाहुँदै यहाँ कोरोना फैलियो । जसको कारण जनताहरु आतंकित र भयभित पनि भएका हुन् । नयाँ रोग त्यसमा उपचार हुने कारणले पनि त्यस्तो भएको हो । तर, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, चिकित्सक, सामाजिक संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम सबैको सक्रिय सहभागिता रह्यो । यसरी सबैको साथ, सहयोग सक्रियतामा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सफल भएका हौं ।
तपाईंहरुले जसरी चुनौतिको सामना गर्नुभयो, त्यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभयो ?
कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न जुन खालको सामना वीरगन्ज नगरपालिकाले गर्नुपर्यो । त्यतिबेला केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काममा हामीले हात हाल्नुपर्यो । प्रदेशबाट पनि केही सपोर्ट त पाएको हो । तर जसरी गर्नुपर्ने हो त्यो भएन । त्यसको लागि वीरगन्ज महानगरपालिका नै लागिपरेर नियन्त्रण गरियो ।
चुनावका बेला दिइएका जनतालाई बाँडिएका आश्वासन अनुसार काम भएन भन्ने गुनोसो छ नि ?
मैले भनेअनुसारका सबै काम गर्न सकेँ भनेर त भन्न सक्दिँन । कोभिडको कारणले पनि भनेअनुसारको काम गर्न अवरोध भयो । विकास निर्माणका कामहरु रोकेर भएपनि कोभिड नियन्त्रणको लागि बजेट दियौं । कोभिडको बाबजुद पनि हामीले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दियौं । कोभिडले झन्डै एक वर्ष वाधा पुर्याएर भनेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन । बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौं ।
स्थानीय सरकार त भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ भनिन्छ नि ?
वीरगन्ज महानगरपाकिलाकामा त्यस्तो खालको समस्या छैन । हरेक वडालाई हामीले बजेट छुट्ट्याइदिन्छौं । बजेट विनियोजन गर्दा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएर गरिन्छ । मेरो महानगरपाकिलामा वडा अध्यक्ष आफैं ठेकेदार भएर, आफैले डोजर किनेर भ्रष्टाचार गरेको पनि पाइएको छैन । जुनसुकै काम गर्दा पनि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका कानुनहरु लागु गरेर गर्ने गरेका छौं । म जुन पार्टीबाट चुनाव जितेको भएपनि सम्पूर्ण जनताको मेयर भएर साझा रुपमा काम गरेको छु । आफ्ना कार्यकर्ता, पार्टी नहेरी सम्पूर्ण जनताको हितमा समान रुपले काम गरेको छु ।
अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु एकदमै भ्रष्ट भए भन्ने छ तपाईंहरुलाई त्यो आरोप छैन ?
हामीलाई त्यस्तो आरोप त खासै छैन । हामीमाथि नगरपरिषद् हुन्छ, महालेखा परीक्षक हुन्छ, फोकल पर्सनहरु हुन्छन्, उपभोक्ता समितिहरु हुन्छन् । नियन्त्रिण र निगरानीका लागि थुप्रै निकायहरु हुन्छन् । जसले हाम्रो क्रियाकलापलाई हेरिराखिेका हुन्छन् । मेयरले मात्रै चाहेर पनि सबैतिर राम्रो हुने होइन । सकेसम्म निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यदि कुनै ठाउँका जनतामा त्यस्तो समस्या छ भने हामीसँग राख्न पाउनुहुन्छ । धेरैको विचार, चाहना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सय प्रतिशत ठीक छ त म भन्न सक्दिँन । धेरै जनप्रतिनिधि र निकायले काम गर्नुपर्ने भएकाले एकजनाको गल्तीले सिंगो महानगरपालिकालाई दोषी दिन मिल्दैन । यदि कसैबाट कमीकमजोरी भएको पाइएमा उचित कारबाही गरिन्छ । त्यसैले केही व्यक्तिको आलोचना र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले सिंगो महानगरपालिका र कार्यरत कर्मचारी असफल छन् भन्न मिल्दैन ।
आफ्नो कामप्रति पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मेरो बलबुताले भ्याएसम्म दिलोज्यान दिएर जनताको काम गरेको छु । उपलब्ध साधन, स्रोतअनुसार सकेसम्म साझा रुपमा काम गर्ने प्रयास गरेको छु । अब केही व्यक्तिहरुको राजनीति प्रतिसोधमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हुन्छ । त्यस्ताबाट थोरबहुत विरोध, आलोचना हुनसक्छ । धेरै सिद्धान्त, विचार समूह भएको ठाउँमा सबैलाई खुसी राख्न त सकिँदैन । कुनै पनि काम गर्दै विभिन्न ठाउँबाट विरोध र अनुगमन र अनुसन्धान भइराखेको हुन्छ, हुनुपनि पर्छ । राम्रो कामको लागि गरिएको रचनात्मक विरोधको स्वागत पनि गर्छौं । खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले प्रतिशोष साँधेर विरोधका लागि विरोध मात्रै गरिएको छ भने प्रतिवाद पनि गर्छौं । तर, राम्रो कामको लागि गरिने रचनात्मक खबरदारीको हामी सधैं स्वागत गर्दछौं ।
तपाईं जुन पार्टीबाट चुनाव जितेको भएपनि साझा मेयर भएर काम गर्नुभएको छ हो ?
केहीले आरोप लगाइहाल्छन् । तर, हामीले जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि एकलौटी गरेका छैनौं । चाहे त्यो कार्यपालिका होस्, चाहे नगरसभाहरु होस् अथवा विभिन्न बैठकहरुमा सम्पूर्ण निर्णयहरु साझा सहमतिमा गर्दछौं । सहमतिबाट भएको निर्णयमा विवाद आउँदैन भनेर त्यसलाई अंगिकार गरेका हौं । वीरगन्ज महानरपालिकामा जेजतिले नेतृत्व गरेका छौं । सबैले मिलाएरै साझा सहमतिबाट काम अगाडि बढाएका छौं । अहिलेसम्म जुनसुकै काम पनि सबै जनप्रतिनिधिहरुको सहमतिबाटै गरिएको छ ।
वीरगन्ज महानरपालिकामा तपाईले साझा नेतृत्वको विकास गर्नुभएको छ ?
जुन काम गर्दा पनि हामी सर्वसम्मत रुपमा अगाडि बढ्छौं । दीर्घकालीन काम गर्नुछ भने सर्वसम्मतको निर्णय नै उपयुक्त हुन्छ । बहुमतको आधारमा अरुलाई मिचेर काम गर्न थालियो भने अजयको हविगत हुन्छ ।
दलित, अल्पसंख्यक र उत्पीडितको लागि कस्तो खालको प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
दलित, अल्पसंख्याक र उत्पीडितको लागि बजेटै छुट्ट्याएर विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । जस्तो ती वर्गका गर्भवती महिला, बालबालिकाको लागि भयो । कतिपय ठाउँहरुमा हामीले आवासको पनि व्यवस्था गरेका छौं । पीछडा वर्गको लागि पशुपालनको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसकारण विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि कामहरु गरेका छौं । सगम ठाउँ हुँदाहुँदै पनि मधेशमा यी विषय ओझेलमा छन् । त्यसलाई मध्येनजर गरी हामी ती वर्गको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएका छौं ।
तीन वर्षे कार्यकाल पुरा गरिरहँदा तपाईंहरुको कामले जनतामा कत्तिको सन्तुष्ट पाउनु भएको छ ?
सुरुमा त हामीलाई नियम, कानुन बनाउँदैमा समय बित्यो । कर्मचारी आपूर्ति, स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि त्यत्तिकै समय गुज्रियो । अहिले आएर ती सबस्याहरु टुंगिएका छन् । १८ वर्षसम्म जुनखालको जनप्रतिनिधिको अवस्था । जसरी उहाँहरुले चलाउनुभएको थियो । जनताहरु पनि पीडित भए । हामीहरु आइसकेपछि जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यो अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा असन्तुष्टि हुने स्वाभाविक हो ।
जनताको अपेक्षा अनुसार हामीहरु काम गर्न लागिपरेका छौं । अब चाहीं जनचाहना अनुसार काम गर्ने वातावरणलाई ट्र्याकमा ल्याइसकेका छौं । मेरो कार्यकालमा कमसेक वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्र बाटो चाहीं बनिहाल्छ । फेरि बाटो भन्नाले व्यक्तिगत होइन गाउँटोललाई शहरसँग जोड्ने बाटाहरु सम्पन्न हुने छन् । जसले गर्दा आउने दिनका मेयर, जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । सबै वडामा भौतिक रुपले साधन, स्रोत जुटाउने र कर्मचारी व्यवस्थापनका काम भइसकेका छन् । आवश्यक साधन, स्रोतहरु जुटाउको काम भइसकेकाले आगामी दिनमा वीरगन्ज महानगरपालिकालाई अझ बढी व्यवस्थित र परिस्कृति ढंगले अगाडि बढाउन सक्छौं ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा भंग गर्नुभयो, यसले स्थानीयतहलाई काम गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो छ ?
प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेपछि काम गर्नलाई केही न केही वाधा भने हुन्छ । स्थानीय तहको पनि काम गर्ने सिलसिलामा केन्द्रीय सरकारसँग, सांसद्सँग र सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरु जोडिएका हुन्छन् । तरलताको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद नहुनु, अथवा संसद् नै भंग हुनुले काममा वाधा पुर्याएको हुन्छ । त्यसैले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने भएपनि छिट्टै होस् । यदि निर्वाचनमै जाने हो भने पनि छिट्टै नै सम्मानित अदालतले टुंगो लगाइदिए हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु । ढिलाइ गर्दै जाँदा देशमा भइरहेका विकास, निर्माणका कामहरु पनि अलमलिन्छन् । फोहोर पनि कोरोनाको कारणले भनेजस्तो काम गर्न पाइएन । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण काममा अलमल भएको छ । सबैले बुझेकै कुरा हो । अस्तिर सरकार भएको बेला राम्रोसँग काम हुन सक्दैन । स्थानीय सरकार भएपनि केन्द्रसँग त्यत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ । अब त्यहाँ अस्थिरता भएपछि हामीले जनताको म्यानडेटअनुसार काम गर्न सक्दैनौं ।
हिजो तपाईंलाई साथ, सहयोग दिएर विजयकुमार सरावगी भनेर हिंड्ने जनताले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यहाँका जनता मसँग ठूलो इच्छा र अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अनुसार हामीले पनि सबै काम गर्न नसकेको हुन सक्छ । हामीले चुनावका बेला धेरै कुराहरु बोलेका छौं । प्रतिवद्धता अनुसार हामीले काम गर्न खोजेको पनि हो । स्थानीय सरकारको पहिलो संरचना भयो । त्यसपनि नयाँ खाले रोगको चपेटाले झन्डै एक वर्ष अलमलमा पार्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीति धरापमा पर्‍यो । यी र यस्तै खाले वाधा व्यवधानले गर्न खोजिएका धेरै कामहरु अलमलमा परे । हिजो हामी धेरै काम गर्ने वाचा गरेका छौं । जनताले ममाथि धेरै आशा, भरोसा र विश्वास गरेका छन् । जनतालाई पनि थाहा वीरगन्ज बनाउने काम मेयरले मात्रै होइन । त्यसमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको पनि साथसहयोग चाहिन्छ । आगामी दिनमा अझ परिष्कृत, परिमार्जित र वैज्ञानिक ढंगले काम गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्दछु ।
# विजय कुमार सरावगी # वीरगन्ज महानगरपालिका
सोमवार, फाल्गुण १० २०७७०९:४०:०५
नेकपा मिल्दा पनि कार्यकर्तालाई थाहा थिएन, फुट्दा पनि थाहा छैन (भिडियो सहित)
कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट हुन जरुरी (भिडियोसहित)
सरकार–विप्लव वार्ता परिणाममुखी हुँदैन (भिडियोसहित)
दलीय व्यवस्था असफल, अब राजासहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन (भिडियोसहित)
राजनीतिमा स्थायी शत्रु स्वाभाविक (भिडियोेसहित)
दलाल अभियानमा कांग्रेस र जसपालाई प्रचण्डको निम्तो (भिडियो सहित)